Izinqubomgomo Zobumfihlo |
I-Infinity Business Growth Network Ltd iyaqonda ukuthi ubumfihlo bakho bubalulekile kuwe nokuthi unendaba nokuthi idatha yakho yangasese isetshenziswa kanjani futhi yabiwa kanjani ku-inthanethi. Sihlonipha futhi siyabazisa ubumfihlo bawo wonke umuntu ovakashela le webhusayithi, i-flanciseek.com (“Indawo Yethu”) futhi sizoqoqa futhi sisebenzise imininingwane yomuntu ngezindlela ezichazwe lapha, futhi ngendlela ehambisana nezibopho zethu namalungelo akho ngaphansi komthetho.
Sicela ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo ngokucophelela futhi uqinisekise ukuthi uyayiqonda. Ukwemukelwa kwakho kwenqubomgomo yethu Yobumfihlo kuthathwa njengokuvela kokusebenzisa kwakho kuqala iSayithi lethu. Uzocelwa ukuba ufunde futhi wamukele le Nqubomgomo Yobumfihlo lapho wenza ukugcwalisa noma imaphi amafomu okuxhumana, amafomu okubhalisa kusayithi lethu. Uma ungemukeli futhi uvumelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, kufanele uyeke ukusebenzisa iSayithi lethu ngokushesha.
1. Izincazelo nokutolika
Kule Nqubomgomo, amagama alandelayo azoba nezincazelo ezilandelayo:
"I-akhawunti" kusho i-akhawunti edingekayo ukufinyelela kanye / noma ukusebenzisa izindawo ezithile nezici zesayithi lethu;
"Ikhukhi" kusho ifayela lombhalo omncane elibekwe kwikhompyutha yakho noma kudivayisi yakho yiSayithi Yethu lapho uvakashela izingxenye ezithile zeSayithi lethu kanye / noma lapho usebenzisa izici ezithile zesayithi lethu. Imininingwane yama-Cookie asetshenziswa yiSayithi Yethu abhalwe esigabeni 13, ngezansi;
"Umthetho We-Cookie" kusho izingxenye ezifanele Zemigomo Yobumfihlo ne-Elektroniki Yezokuxhumana (EC Directive) Reg 2003
"Imininingwane yomuntu" kusho noma iyiphi idatha yonke ehlobene nomuntu okhonjwa ongakhonjwa ngokuqondile noma ngokungaqondile kuleyo datha. Kulokhu, kusho idatha yomuntu siqu osinikeza yona ngeSayithi lethu. Le ncazelo kufanele, lapho kufanele khona, ifake izincazelo ezinikezwe eMthethweni Wokuvikelwa Kwedatha 1998 OR Umthethonqubo we-EU 2016/679 - Imithetho ejwayelekile yokuvikelwa kwedatha (“GDPR”)
"Si / thina / eyethu" kusho i-Infinity Business Ukukhula Network Ltd, inkampani ekhawulelwe ebhalisiwe eNgilandi ngaphansi kwenombolo yenkampani engu-9073436, enekheli elibhalisiwe kungu-2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES, futhi ikheli layo lokuhweba linjengalokhu okungenhla.
2. Imininingwane Ngathi
Isayithi lethu liphethwe futhi liphethwe yi-infinity Business Growth Network Ltd, inkampani elinganiselwe ebhalisiwe eNgilandi ngaphansi kwenombolo yenkampani engu-9073436, enekheli elibhalisiwe kungu-2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES futhi ikheli layo lokuhweba linjengalokhu okungenhla.
Inombolo yethu ye-VAT ingama-252 9974 63.
Isikhulu Sokuvikelwa Kwemininingwane yethu nguMnu Joel Bissitt, futhi singathintwa nge-imeyili kule nombolo [Email protected], ngocingo ku-01323 332838, noma ngeposi ku-2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES.
3. Ihlanganisani Le Nqubomgomo?
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela ekusebenziseni kwakho isayithi lethu. Isayithi lethu lingaqukatha izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi. Uyacelwa uqaphele ukuthi Asinakulawula ukuthi idatha yakho iqoqwa, igcinwa noma isetshenziswa kanjani amanye amawebhusayithi futhi Sikucebisa ukuthi uhlole izinqubomgomo zobumfihlo zanoma iyiphi amawebhusayithi ngaphambi kokubanikeza noma iyiphi idatha.
4. Amalungelo akho
Njengesifundo sedatha, unamalungelo alandelayo ngaphansi kwe-GDPR, le Nqubomgomo nokusebenzisa kwethu idatha yomuntu siqu yakhelwe ukusekela:
Ilungelo lokwaziswa ngeqoqo lethu nokusetshenziswa kwemininingwane yomuntu uqobo;
Ilungelo lokuthola imininingwane yomuntu siqu Esibambe ngayo (bheka isigaba 12);
Ilungelo lokuphinda ulungiswe uma ngabe kukhona imininingwane yomuntu siqu Esibambe ngayo ayilungile noma ayiphelele (sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane esesigabeni 14);
Ilungelo lokukhohlwa - okusho ilungelo lokucela ukuthi Sisuse noma imiphi imininingwane yomuntu siqu Esikubambe ngawe (Sibamba imininingwane yakho yomuntu siqu kuphela isikhathi esilinganiselwe, njengoba kuchaziwe esigabeni 6 kepha uma ungathanda ukuthi Sisheshe siyicishe Xhumana nathi usebenzisa imininingwane esesigabeni 14);
Ilungelo lokukhawulela (okusho ukuvimbela) ukucubungulwa kwemininingwane yakho;
Ilungelo lokutholakala kwedatha (ukuthola ikhophi ledatha yakho siqu ukuze uyisebenzise kabusha ngenye insizakalo noma inhlangano);
Ilungelo lokuphikisa kithi usebenzisa idatha yakho uqobo ngezinhloso ezithile; futhi
Amalungelo maqondana nokwenza izinqumo ezizenzakalelayo kanye ne-profiling.
Uma unesizathu sokukhononda ngokusetshenziswa kwethu kwemininingwane yakho, sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane enikezwe esigabeni 14 futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuxazulula inkinga kuwe. Uma singakwazi ukusiza, futhi unelungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla eziphethe zase-UK, iHhovisi Lekhomishini Yezokwazisa.
Ngeminye imininingwane mayelana namalungelo akho, sicela uthintane nehhovisi Lekhomishini Yezokwazisa noma i-Citizens Advice Bureau yangakini.
5. Imiphi imininingwane Esiyiqoqayo?
Kuya ngokusebenzisa kwakho isayithi lethu, singase siqoqe imininingwane ethile noma engeyona eyomuntu uqobo (sicela ubheke isigaba 13 Ekusetshenzisweni kwethu kwamakhukhi nobuchwepheshe obufanayo:
ibhizinisi / igama lenkampani
imininingwane yokuxhumana efana namakheli e-imeyili nezinombolo zocingo;
imininingwane yenombolo efana nekhodi yeposi, okuthandayo, kanye nezintshisakalo;
imininingwane yezezimali enjengezinombolo zekhadi lesikweletu / lasebhange;
uhlobo lwesiphequluli sewebhu nenguqulo;
uhlu lwama-URLs aqala ngesayithi elibhekisa kulo, umsebenzi wakho kusayithi lethu, nesayithi ophuma kulo;
Noma yimiphi eminye imininingwane okhetha ukuyaba
6. Silusebenzisa kanjani Idatha yakho?
Yonke imininingwane yomuntu iyenziwa Sizohambisana nezibopho Zethu futhi sivikele amalungelo akho ngaphansi komthetho wokuvikelwa kwedatha we-1998 ne-GDPR ngaso sonke isikhathi. Ngemininingwane engaphezulu kwezokuphepha bheka isigaba 7, ngezansi.
Ukunikeza nokulawula i-Akhawunti yakho nokuphenya kubandakanya ukufaka imininingwane yakho kubakhangisi abafanele kwiSayithi lethu
Ukwenza ubuwena nokwamukelise isipiliyoni sakho kusayithi lethu;
Ukuhlinzeka imikhiqizo yethu FUTHI / NOMA nezinsizakalo kuwe (sicela wazi ukuthi Sidinga imininingwane yakho ukuze ungene kwisivumelwano nawe);
Ukwenza ubuciko kanye nokwakha imikhiqizo yethu FUTHI / NOMA nezinsizakalo zakho;
Ukukunikeza ngama-imeyili owakhethile kuwo (ungazikhipha ohlwini noma uphume nganoma yisiphi isikhathi Ngokubhaliswa esizeni sethu
Ukuhlaziya ukusetshenziswa kwakho kweSayithi lethu nokuqoqa impendulo ukuze Usenze sikwazi ukuthuthukisa iSayithi lethu nokuhlangenwe nakho kwakho komsebenzisi;
Ngemvume yakho kanye / noma lapho kuvunyelwe khona ngokomthetho, Futhi singasebenzisa idatha yakho ngezinhloso zokuthengisa ezingafaka ukuxhumana nawe nge-imeyili FUTHI / NOMA ucingo FUTHI / NOMA Umlayezo wombhalo we-SMS FUTHI / noma uthumele imininingwane egameni labakhangisi bethu, izindaba nokunikelwayo kumikhiqizo yethu FUTHI / NOMA Ngeke, noma kunjalo, sikuthumele noma yikuphi ukukhangisa okungacelwanga noma ugaxekile futhi sizothatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi Sivikela amalungelo akho ngokuphelele futhi sihambisana nezibopho Zethu ngaphansi koMthetho Wokuvikelwa kwedatha we-1998 OR I-GDPR kanye Nemithetho Yobumfihlo ne-Elekthroniki Yezokuxhumana (EC Directive) 2003.
FUTHI / NOMA
Abantu besithathu okuqukethwe kwabo okuvela esizeni sethu bangasebenzisa amakhukhi wenkampani yangaphandle, njengoba kuchazwe ngezansi esigabeni 13. Sicela ubheke isigaba 13 ukuthola eminye imininingwane ngokulawula amakhukhi. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi Asilawuli imisebenzi yabanye abantu besithathu, noma imininingwane abayiqoqayo bese beyisebenzisa futhi sikucebisa ukuthi uhlole izinqubomgomo zobumfihlo zabanoma yiliphi iqembu lesithathu.
Unelungelo lokuhoxisa imvume yakho Kithi usebenzisa imininingwane yakho nganoma yisiphi isikhathi, futhi ucele ukuthi Siyisuse.
Asigcini imininingwane yakho yomuntu siqu isikhathi eside kunesidingekayo ngenxa yesizathu (s) eyayiqoqwe okokuqala. Idatha-ke izogcinwa kulezi zikhathi ezilandelayo (noma ukugcinwa kwayo kuzonqunywa kwizisekelo ezilandelayo):
Kuze kube Ufisa ukubhalisa ngewebhusayithi yethu.
7. Silugcina Kanjani futhi kuphi ulwazi lwakho?
Sigcina idatha yakho yomuntu uqobo uma nje Sidinga ukuyisebenzisa njengoba kuchaziwe ngenhla esigabeni 6, kanye / noma uma nje sinemvume yakho yokuyigcina.
Enye noma yonke imininingwane yakho ingahle igcinwe ngaphandle Kwendawo Yezomnotho YaseYurophu (“i-EEA”) (I-EEA iqukethe wonke amazwe angamalungu e-EU, kanye neNorway, i-Iceland, neLiechtenstein). Uthathwa njengokwamukela futhi uvumelana nalokhu ngokusebenzisa isayithi lethu futhi uthumela imininingwane kithi. Uma sigcina imininingwane ngaphandle kwe-EEA, Sizothatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphathwa ngendlela ephephile futhi ngokuphephile njengoba kungaba ngaphakathi e-UK nangaphansi koMthetho Wokuvikelwa Kwedatha 1998 OR I-GDPR ifaka:
Kusetshenziswa amaseva avikelekile nezinye izindlela zokubethela ezinikezwe ngabasizi bewebhusayithi yethu nabathengisi beqembu lesithathu.
Ukuphepha kwedatha kubaluleke kakhulu Kithi, futhi ukuvikela imininingwane yakho Sithathe izinyathelo ezifanele zokuvikela nokuphepha idatha eqoqwe ngeSayithi lethu.
Izinyathelo Sithatha ukuvikela futhi sivikele idatha yakho ifaka:
Kusetshenziswa amaseva avikelekile nezinye izindlela zokubethela ezinikezwe ngabasizi bewebhusayithi yethu nabathengisi beqembu lesithathu
8. Ngabe Sabelana Imininingwane Yakho?
Singabelana ngemininingwane yakho nezinye izinkampani eziseqenjini lethu ngezinjongo zokuthengisa. Lokhu kufaka phakathi izinkampani ezixhasa thina kanye Nenkampani yethu yokubamba kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo.
Kwesinye isikhathi singenza isivumelwano nezinkampani zangaphandle ukukunikeza imikhiqizo nezinsizakalo esikhundleni sethu. Lokhu kungafaka ukucubungula izinkokhelo, ukulethwa kwezimpahla, izinsiza zeinjini yokucinga, ukukhangisa nokumaketha. Kwezinye izimo, izinkampani zangaphandle zingadinga ukufinyelela kokunye noma yonke imininingwane yakho. Lapho noma iyiphi imininingwane yakho idingeka ngenhloso enjalo, Sizothatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi idatha yakho izophathwa ngokuphepha, ngokuphepha, nangokuhambisana namalungelo akho, izibopho zethu, nezibopho zomuntu wesithathu ngaphansi komthetho .
Singahle sihlanganise izibalo ngokusetshenziswa kweSayithi Yethu kufaka phakathi idatha kumathrafikhi, amaphethini wokusebenzisa, izinombolo zomsebenzisi, ukuthengisa nolunye ulwazi. Yonke imininingwane enjalo ngeke ivezwe futhi ngeke ifake noma iyiphi idatha ekhomba wena, noma iyiphi imininingwane engaziwa engahlanganiswa nenye idatha futhi isetshenziselwe ukukubona. Ngezikhathi ezithile singabelana ngaleyo datha nabantu besithathu njengabatshalizimali abazoba khona, abahlanganyeli bethu, abalingani bethu, nabakhangisi. Imininingwane izokwabiwa kuphela futhi isetshenziswe ngaphakathi kwemingcele yomthetho.
Kwesinye isikhathi singase sisebenzise ama-processor wedatha wesithathu akhiwe ngaphandle Kwendawo Yezomnotho YaseYurophu (“i-EEA”) (I-EEA iqukethe zonke izifundazwe ezingamalungu e-EU, neNorway, i-Iceland neLiechtenstein). Lapho Sidlulisela noma iyiphi imininingwane yomuntu engaphandle kwe-EEA, Sizothatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphathwa ngendlela ephephile futhi ngokuphephile njengoba kungaba ngaphakathi e-UK nangaphansi koMthetho Wokuvikelwa Kwedatha 1998 OR I-GDPR
Ezimweni ezithile, Kungadingeka ngokomthetho ukuthi sabelane ngemininingwane ethile esiphethwe Yithi, engahle ifake imininingwane yakho, ngokwesibonelo, lapho Sabandakanyeka khona ezinkambisweni zomthetho, lapho Sithobela izidingo zomthetho, umyalo wenkantolo, noma uhulumeni igunya.
9. Kwenzekani Uma Amabhizinisi Ethu Eguqula Izandla?
Kungenzeka, ngezikhathi ezithile, sandise noma sinciphise ibhizinisi Lethu futhi lokhu kungafaka ukuthengisa kanye / noma ukudluliselwa kokulawulwa kwakho konke noma ingxenye yebhizinisi lethu. Noma imiphi imininingwane yomuntu oyinikezile izodingeka, lapho ifaneleka kunoma iyiphi ingxenye yebhizinisi Lethu edluliswayo, idluliselwe kanye naleyo ngxenye futhi umnikazi omusha noma iqembu elisanda kulawula, livunyelwe ngaphansi kwemigomo yale Nqubomgomo Yobumfihlo. ukusebenzisa leyo datha ngezinhloso ezifanayo kuphela eqoqwe yithi.
Uma kwenzeka noma iyiphi idatha yakho idluliswa ngale ndlela, ngeke uthintwe kusenesikhathi futhi waziswe ngoshintsho. Kodwa-ke uzonikezwa ukhetho lokuthi idatha yakho isuswe ngumnikazi noma isilawuli esisha.
10. Ungayilawula Kanjani Idatha Yakho?
Ngokungeziwe kumalungelo akho ngaphansi kwe-GDPR, ehlelwe esigabeni 4, lapho ufaka imininingwane yomuntu siqu ngeSayithi lethu, unganikezwa izinketho zokunciphisa ukusetshenziswa kwethu kwedatha yakho. Ikakhulu, Sihlose ukukunikeza izilawuli eziqinile Ekusetshenzisweni kwethu kwedatha yakho ngezinjongo zokumaketha ngqo (kufaka phakathi amandla okuphuma ekutholeni ama-imeyili avela kithi ongawenza ngokungavumeli ukubhalisa usebenzisa izixhumanisi ezinikezwe ku-imeyili yethu kanye nephuzu lokunikeza imininingwane yakho
Ungase futhi ufise ukubhalisela eyodwa noma ngaphezulu yezinsizakalo ezikhethekile ezisetshenziswa e-UK: Insizakalo Yokukhetha Ngocingo (“i-TPS”), i-Corporate Ucingo Preference Service (“i-CTPS”), ne-Mailing Preference Service (“ ama-MPS ”). Lokhu kungasiza ekuvimbeleni ukuthi uthole ukumaketha okungacelwanga. Uyacelwa wazi, kepha, ukuthi lezi zinsizakalo ngeke zikuvikele ekutholeni ukuxhumana okuvumile ukuthi ukuthole.
11. Ilungelo lakho lokubamba imininingwane
Ungangena ezindaweni ezithile zesayithi lethu ngaphandle kokuhlinzeka nganoma iyiphi idatha ngaphandle kokufaka amakhukhi. Noma kunjalo, ukusebenzisa zonke izici nemisebenzi etholakala kusayithi lethu kungadingeka ukuthi uthumele noma uvumele ukuqoqwa kwemininingwane ethile.
12. Ungayithola Kanjani Idatha Yakho?
Unelungelo lokucela ikhophi lanoma iyiphi imininingwane yakho ephethwe yi-Us Ngaphansi kwe-GDPR, imali ekhokhwa u- £ 10 futhi Sizonikeza noma yiluphi ulwazi ngokuphendula isicelo sakho zingakapheli izinsuku ezingama-40. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane ku- [Email protected] noma usebenzisa imininingwane yokuxhumana ngezansi kwesigaba 14. Ngenye indlela, sicela ubheke inqubomgomo yethu yokuvikela idatha lapha
13. Ukusetshenziswa kwethu kwamakhukhi
Isayithi lethu lisebenzisa amakhukhi ukuhlinzeka ngolwazi lomsebenzisi olungcono kakhulu ngokuvakasha kwakho. Ukubuka imininingwane egcwele yenqubomgomo yethu yamakhukhi sicela uvakashele franchiseek.com/cookie-policy
14. Ukuxhumana Nathi
Uma unemibuzo mayelana neSayithi lethu noma le Nqubomgomo Yobumfihlo, sicela uxhumane nathi Nge-imeyili ku [Email protected], ngocingo ku- +44 1323 332838, noma ngeposi ku-2 Bromley Rd, Seaford, East Sussex, BN25 3ES. Sicela uqinisekise ukuthi umbuzo wakho ucacile, ikakhulukazi uma kuyisicelo semininingwane emayelana nedatha Esikubambe ngawe (njengoba kushiwo isigaba 12, ngenhla).
15. Izinguquko kwinqubomgomo yethu yobumfihlo
Singashintsha le Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile (ngokwesibonelo, uma umthetho ushintsha). Noma yiluphi ushintsho luzothunyelwa ngokushesha kusayithi lethu futhi uzothathwa ngokuthi wamukele imigomo Yenqubomgomo Yobumfihlo yokusebenzisa kwakho kuqala Indawo yethu kulandela izinguquko. Sincoma ukuthi uhlole leli khasi njalo ukuze uhlale unolwazi olusha.